MSF oo ka walaacsan dib u dejinta qaxootiga xerada Ifo 3 oo ku taala Dhadhaab. – SBC
Hayádda dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaa aad uga walaacsan dib u dejinta qoxootiga Soomaalida ah ee la dejinayo xerada Ifo 3 ee ku taala Dhadhaab. Dib u dejintaas oo shalay bilaabatey oo ay horsed ka ahayd hayádda umuuraha qaxootiga ee Qarama Midoobey (UNHCR) ayaa lagu sameeyey qaab an habooneen iyo iyadoo aan lala tashanin hayádaha kale ee samafalka ka bixiya xeryaha Dhadhaab iyo bulshada qaxootiga ah ee halkaas ku nool.
Maalin walba 200 oo qoys ayaa loo rarayaa xerada cusub ee Ifo 3 oo aan laga heli kara adeegya aad u yar, biyo aan dadka ku filneen iyadoo aysan jirin musqulo fiican.
Waxaa la filaya in xeradaasi cusub ee Ifo 3 la dejiyo 60,000 oo qof oo qaxooti ah. Tiradaas ayaa ah mid aad u badan maadaama xerada loogu talagalay 40,000 oo qof kali.Hayádaha samafalka Jimcihii aynu soo dhafnay kali ayaa la ogeysiiyey dib u dejinta lagu sameynaaya qaxootigaasi.
Inkastoo haatan howlo biya dhaamin ah loo sameynaya Kaampka cusub, musqulana si deg deg ah loo dhiisaya, hadana xerada ayaa ka hooseeysa heerka caalamiga ah ee looga talagalay xeryaha qaxootiga.
Hayádda MSF waxaa ay ka walaacsantahay in cuduro ay ka dilaacaan xeradani cusub haddi dad fara badan halkass la dejiyo iyadoo aan lahayn adeegyada asaasiga ee noolaleed.
Dhanka kale meel aan ka fogeen xeradaas cusub ayaa waxaa ku taala xerada Ifo 2 oo ahayd in la furo November sanadkii la soo dhaafay. Ifo 2 waxaa ka qodan ceelal, waxaa ka dhisan musqulo waxeyna leehdaya koronto,guriyo, skuulo iyo isbitaal dhameystiran.
Sidaa darted MSF waxaa ay ugu yeereysaa dowlada Kiinya iyo hay’adda UNHCR in dadka qaxootiga ah ee kasoo cararay abaaraha iyo rabshadah aay dejiyaan xeradaas Ifo 2 maadaam ay dowlada Kiinya ku dhawaaqday in xeradaasi la furaya12 oo la soo dhaafay.